Dib -u -eegista Caymiska Nolosha ee Globe Sannadkii 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Caymiska Nolosha Globe Sannadka 2021 -ka
Nolosha Globe in kasta oo ay aad u yar tahay oo aysan jirin siyaasad baaris caafimaad oo weli maamusha inay cabasho ka badan intii laga filayay shirkad baaxaddeeda leh.
Aan tagno dib -u -eegista Caymiska Globe si aan u ogaano sababta ay ugu muuqdaan inay la dagaallamayaan qanacsanaanta macmiilka iyo haddii runtii ay u qalmaan inay lahaadaan caymis nololeed iyaga.
Waa maxay Globe Life?
Globe Life waa shirkad caymis oo u heellan bixinta nolol iyo caymis caafimaad oo dheeri ah si ay adiga iyo dadka aad jeceshahay uga badbaadisaan dhibaatooyinka maaliyadeed ee soo ifbaxa inta lagu jiro dhacdooyinka nasiib -darrada ah.
Waxay hubisaa inay kuu sahlanaato inaad iibsato badeecada ku habboon baahiyahaaga.
Faallooyinka Caymiska Nolosha Globe- Sharci ama Fadeexad
Nolosha Globe waxay ku saleysan tahay McKinney Texas waxayna ka dhigeysaa caymiska nolosha iyo caafimaadka in la heli karo dhammaan waddanka oo dhan.
Iyada oo laamihiisa kaliya ee bixiya magdhawga caymiska nolosha iyo alaabooyinka caymiska caafimaadka ee dheeraadka ah noloshu runtii waa sharci maxaa yeelay waxay jirtay oo ganacsi jirtay in ka badan 40 sano.
Iit waxay kasbatay qiimeyn madaxbannaan shirkadaha sida aniga ugu fiican uguna fiican ganacsiga dhabta ah ee BBB.
Dib-u-eegista Caymiska Nolosha Globe- Sida ay u shaqayso
Globe Life waxay bixisaa caymis nololeed oo dhan, caymis nololeed oo aan lahayn daawo, imtixaan al, iyo caymis dhimasho shil ah. Akhri si aad wax uga ogaato mid kasta oo ka mid ah badeecadan iyo sida xigashooyinka Globe Life ay isbarbar dhigaan.
Haddii aad raadinayso caymiska kharashka kama dambaysta ah oo leh qoraal kooban, laga yaabee inaad leedahay arrin caafimaad, Globe Life waxay bixisaa badeecooyin kala duwan oo ku habboon baahidan gaarka ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad caafimaad qabto ama aad rabto dheef ka weyn beddelka dakhliga marka aad gudubto, waxaan kugula talineynaa inaad isbarbardhigto xigashooyinka caymisyada kale, maadaama aad ka heli doonto qiimayaal ka fiican iyo xulashooyin ballaaran oo meelo kale ah.
Globe Life kaliya waxay bixisaa caymis aan lahayn baaritaan caafimaad sidaa darteed, haddii aad caafimaad qabtid, waxaad bixin doontaa qiimayaal ka sarreeya isla macaashka dhimashada intii aad ku bixin lahayd caymis leh qoraal buuxa.
Intaa waxaa dheer, siyaasadaha noloshooda muddada waxay leeyihiin dhererka muddada ugu badan oo ah 5 sano, markaa haddii aad ogtahay inaad rabto caymis in muddo ah, waxaad bixin doontaa khidmado sarreeya celcelis ahaan maaddaama kharashku kordho mar kasta oo aad cusboonaysiiso caymiska.
Caymiska Nolosha Globe- Noocyada
Globe Life waxay leedahay shan qorshe caymis nololeed oo kala duwan. Midkoodna xeerarkiisa midna kaaama rabo inaad qaadato baaritaan caafimaad. Hase yeeshee, weli waa laguu diidi karaa sababtoo ah taariikhdaada caafimaad oo ku salaysan codsigaaga.
In kasta oo aad ka heli karto xigasho onlayn ah siyaasadaha qaarkood, waa inaad si toos ah u wacdaa Globe Life si aad u hesho qiime dhammaystiran oo aad u iibsato siyaasaddaada.
Geeri Shil ah
Xeerka caymiska nolosha ee shilka ee Globe Life waxaa loogu talagalay in lagu kabo caymiska noloshaada kale. Waxay siisaa ilaa $ 250,000 dhimashada shilka ama khasaaraha shilka ee la daboolay.
Siyaasadda waxaa ku jira astaamahan:
1. Dheefta sicir -bararka:
Sannad kasta siyaasaddu waa hirgashaa, macaashka caymiska asaasiga ah waxaa la kordhin doonaa 5% ilaa macaashka aasaasiga ahi uu la mid noqdo 125% macaashka asaasiga ah ee hore ama ilaa inta caymiska maamulaha uu noqonayo 70, hadba kii hore.
2. Dheefta suunka:
Haddii caymiska asaasiga ah la dilo inta lagu shaqeynayo ama la saaran yahay baabuur iyo suunka suunka, Globe Life ayaa bixin doonta 10% dheeraad ah dheefta guud ee caymiska.
3. Gunnada waxbarashada:
Haddii caymiska asaasiga ahi uu dhinto shil daboolan dartiis, Globe Life waxay siin doontaa 10% dheeraad ah ilmo kasta oo ku tiirsan inta u dhaxaysa 15 iyo 22. Faa'iidadan waxaa lagu heli karaa oo keliya qorshaha qoyska waxaana lagu jaray $ 10,000.
4. Gargaarka masiibada guud:
Haddii caymiska aasaasiga ah iyo xaaskooda caymiska labaduba ay ku dhintaan shil caadi ah, macaashka geerida xaaska / caymiska waxaa loo kordhin doonaa 100% macaashka aasaasiga ah ee caymiska aasaasiga ah.
5. Dheefta kala goynta:
Globe Life ayaa bixin doonta dheef luminta gacanta, cagta, ama isha.
6. Faa'iidada curyaanka:
Faa'iidada curyaannimada waxay daboolaysaa quadriplegia, paraplegia, iyo hemiplegia.
Faa'iidada duulimaadka ee ganacsi ahaan loo qorsheeyey: Haddii maamulaha caymisku uu u dhinto dhaawacyo jidheed oo soo gaadhay markii uu u safrayay sidii rakaabkii bixinayay lacagta rakaabka ee diyaarad ganacsi ahaan loo qorsheeyay.
Globe Life waxay bixin doontaa qaddar dheef oo dheeraad ah oo la mid ah gunnada aasaasiga ah ee caymiska.
Waxaad kaloo dooran kartaa qorshaha qoyska ee dhimashada shilka ah, halkaas oo macaashka ugu weyn ee xaaska / sayga iyo carruur kasta oo ku tiirsan ay la mid noqon doonto boqolkiiba macaashka asaasiga ah ee caymiska aasaasiga ah markii shilka dhacay.
Macaashka xaaska wuxuu la mid yahay 60% faa'iidooyinka caymiska aasaasiga ah. Macaashka carruurtu wuxuu la mid yahay 10% faa'iidooyinka caymiska asaasiga ah haddii uu jiro xaaska iyo 20% faa'iidooyinka caymiska aasaasiga ah haddii uusan jirin xaaska
Siyaasadaha geerida shilka ah ayaa dammaanad qaadaya siyaasadaha arrimaha, taasoo la micno ah inaan laguu diidi karin caafimaadkaaga dartiis haddii aad tahay inta u dhaxaysa 18 iyo 69. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad si taxaddar leh u akhridaa shuruudaha shilalka la daboolay si aad u hubiso inaad fahantay markii Globe Life bixin lahayd geeri. dheef.
Faallooyinka Nolosha Globe- Wanaag iyo Xun
Nolosheeda Globe, waxaad ku heli kartaa caymis adiga oo aan marin baaritaan caafimaad. Wali waa inaad ka jawaabtaa su'aalaha ku saabsan caafimaadkaaga, laakiin uma baahnid inaad ballan samaysato oo aad booqato dhakhtar si aad u hesho caymis
Nolosha Globe waxay siisaa fursad 30 maalmood oo lacag celin ah. Haddii aad go'aansato inaad ka baxdo caymiskaaga sabab kasta ha ahaato 30 maalmood oo aad saxeexdo waad joojin kartaa oo dib u soo celin kartaa lacagtaadii
Nolosha Globe ma laha wakhti sugitaan. Caymiskaagu wuxuu bilaabmaa isla marka aad saxiixdo caymiskaaga
Waxay bixisaa caymiska aaska iyo kharashyada kale ee nolosha
Nolosha Globe waxay leedahay siyaasado loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn ee da 'kasta leh
Nolosha Globe waxay dabooshaa faa'iidooyin badan oo dhimasho shil ah
Caymiska Nolosha Globe wuxuu aad uga sareeyaa tirada celceliska cabashooyinka macaamiisha. Cabashooyinka badankoodu waxay ku saabsanayeen sida siyaasadaha iyo sheegashooyinka loo maareeyay
Waqtiga nolosha Globe, caymisyada nolosha caymiska nolosha ayaa kordha intaad ku sii jirto da'da shanta sano ee cusub. Kordhinta waxay noqon kartaa mid aad u sareysa taasoo keenaysa in lacagta qaaliga ahi qaali noqoto.
In kasta oo shirkado badan oo caymis nololeed ay bixiyaan siyaasad nololeed oo dhan oo la hubo (macnaha siyaasadaha aan kaaga baahnayn inaad ka jawaabto su'aalaha caafimaadka ama aad qaaddo baaritaan caafimaad), Globe Life ma laha ballanqaadyo qorsheyaal nololeed oo dhan. Waa inaad ka gudubtaa hababka hoosta Globe Life si aad ugu qalanto siyaasad.
Faa'iidooyinka ugu sarreeya ee aad u hooseeya
Siyaasadaha ka qaalisan caymiska nolosha muddada dheer
Beddelka dakhliga ee macaashka dhimashada weyn
Faallooyinka Macaamilka Nolosha Globe
Globe Life waa shirkad caymis nololeed oo sharci ah oo leh A+ qiimeynta AM Best, waxay leedahay tiro cabashooyinka macaamiisha ah.
Tusaha Cabashada NAIC ee 2016, oo cabbiraya tirada cabashooyinka ay shirkaddu ka hesho cabbirkeeda, waxay ahayd 5.10. Dhexdhexaadiyaha qaranku waa 1.0, taas oo macnaheedu yahay Globe Life waxay heshaa cabashooyin badan oo ka badan intii laga filayay shirkad baaxaddeeda leh.
Waxay heshay 2.83% dhammaan cabashooyinka ku jira warshadaha caymiska nolosha shaqsiyeed, in kasta oo ay ka kooban tahay kaliya 0.29% suuqa.
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha Globe Life ayaa sheegay inay la kulmeen caqabado la xiriira adeegga macmiilka ama helidda kaalmo lagu qanco. Kooxda wax iibinta ee shirkaddu, dhanka kale, aad bay ugu adag tahay wicitaannada iyo agab dirista.
Haddii aad leedahay caymis nololeed, hubso in ka -faa'iideystahaagu uu hayo macluumaadka lagama maarmaanka u ah inuu fayl -gareeyo sheegasho iyo faahfaahinta lacag -bixintaada qaaliga ah.
Qaar ka mid ah macaamiisha Globe Life ayaa sheegay in waalidiintooda ay ku guuldareysteen inay lacag bixiyaan sababo la xiriira jirro ama waallida, waxayna dhib kala kulmeen dib u soo celinta caymiska ka dib markii siyaasaddu meesha ka baxday.
Ma doonaysid inaad sanado ku bixisid bixinta dheefaha qoyskaagu ma helo markaad dhimato.
Tusaha Caymiska Nolosha Globe
Kahor intaadan bilaabin isbarbardhigga shirkadaha, dooro nooca caymiska nolosha ee aad rabto, sida muddada ama nolosha oo dhan. Go'aanso kuwa raacsan caymiska nolosha, haddii ay jiraan, aad rabto in xeerka lagu daro.
Xisaabi inta caymis nololeed ee aad u baahan tahay iyo inta aad rabto in caymisku sii socdo. Hubi in caymisyada aad ka fekereyso ay bixiyaan caymiska aad raadineyso.
Markaad isbarbardhigayso qiimayaasha, hubso in xigashooyinku ay yihiin isla caymis isla muddadaas ah. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in shuruudaha caafimaad ee siyaasaddu ay ku habboon yihiin baahiyahaaga.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka booddo imtixaanka caafimaad ee caymiska nolosha laakiin ha ka fikirin inaad ka jawaabto su'aalaha caafimaadka, xaqiiji in habka codsiga ee siyaasad kasta oo aad isbarbardhigayso ay la mid tahay tan.
Qiimaha ma noqon karo darawalka ugu weyn ee ka dambeeya go'aankaaga iibsashada. Eeg tirada cabashooyinka macmiilka ee shirkad kasta hesho, maadaama tirooyin badan ay noqon karaan calan gaduudan oo ku saabsan tayada adeegga
Dib-u-eegista Caymiska Globe- Sida loo bilaabo
Waxaad iska diiwaangelin kartaa Caymiska Globe haddii aad u dhaxayso da'da 65 iyo 80 oo aad xiisaynayso Caymiska Nolosha Oggolaanshaha La -ballanqaaday. Lambarka la wacayo 800-581-9700 si aad u codsato ama u wacdo 800-831-1200.
Waxaad codsan kartaa xigasho onlayn ah ama toos u wac wakiil sidoo kale waxaad ku dalban kartaa siyaasad boostada. Halkaan ka fiiri daboolka caymiska nolosha ee laga heli karo Globe.
Dib-u-eegista Caymiska Globe- Sida Loo Joojiyo
Waad joojin kartaa siyaasaddaada caymiska nolosha adduunka adigoo wacaya waaxdooda daryeelka macmiilka si aad ugu sheegto welwelkaaga ama sababaha cabashada wac taleefankaaga 1-888-650-4082.
Dib -u -eegista caymiska nolosha Globe 2021 waxay raadineysaa inay kaa caawiso helitaanka doorashada saxda ah marka ay timaaddo caymisyada nolosha. Markaa isha ku hay oo dooro waxa adiga kuu habboon.
http //: www.nerdwallet.com
http //: www.investopedia.com
10 Shirkadaha Caymiska Nolosha Aan Lahayn Shuruudaha Baaritaanka Caafimaadka 2022 -ka
Kuwo badan ayaa doorbida inay iibsadaan caymis nololeed iyagoo aan la kulmin walaaca jirka iyo…